I-Villa Biancospino kufuphi nolwandle, amachibi okuqubha kunye ne-spa
ULaura unezimvo eziyi-61 zezinye iindawo.
yindlu ezimeleyo yefama entle "Casa Conti di Sotto" ekhethwe nguDiscovery Channel phakathi kweendawo ezi-3 ezintle kakhulu eTuscan Maremma.
Igadi yabucala ene-solarium enkulu kunye ne-whirlpool eshushu, iindawo zokuhlala zelanga, isihlalo sokujingi, i-barbecue kunye nendawo yokomelela yabucala, iindwendwe ezi-7/8
Ime kwindawo entsha ye-vip ye "Casa Conti di Sotto" nje imizuzu eli-10 ukusuka kulwandle oluhle kunye neelwandle zeGulf of Follonica.
2 iishawari ze-hydromassage
Inokufikelela kumachibi okuqubha, i-Spa, i-Kneipp, i-Sorgente kunye ne-Sauna, i-gym, igumbi lokufunda kunye nomculo kunye nayo yonke imidlalo ye "Casa Conti di Sotto" (i-chessboard, i-tennis yetafile, i-table football, i-bowling eluhlaza, isilayidi, i-swings kunye nemidlalo. abantwana) izindlu:. Coffee American Machine, ngetoaster, Umxhubi, idraya yeenwele, microwave, satellite iplasma TV, ekhuselekileyo, wifi kuquka Romantic seenkuni eziko.
Amachibi amabini okuqubha anesolarium enkulu (ichibi labantwana elifudunyezwe lilanga), ipaki yokuphumla, indawo yokudlala yabantwana, igadi yezoga, iBowling eluhlaza, intenetya yetafile, ibhola yetafile, ichess. yokupaka yangaphakathi.
Iziko lokuphumla eline-whirlpool eshushu.
"La Sorgente", iqula elincinane lokuqubha lendalo.
Indawo yokuzivocavoca yangaphakathi nangaphandle entywiliselwe kuluhlaza weMeditera Macchia.
Igumbi lokufunda nelokudlala.
I-Therme della Principessa (indawo yokuphumla eneSauna, ichibi elibandayo kunye nebhafu yaseTurkey) I-Spa yasebusika obutsha: Ichibi lokuqubha langoku elineebhedi ze-hydromassage kunye nezihlalo, ishawari yeemvakalelo, umoya wokuphumza i-yoga
Ifumaneka: inkonzo ye-wifi, i-baby sitter, i-maid, i-air conditioning, umatshini wokuhlamba, i-B & B (isidlo sakusasa egadini okanye ngqo kwigumbi), i-massage ye-Ayurvedic.
Ukufudumeza okuzimeleyo (€ 10.00 ngosuku).
Ilinen kunye neetawuli (utshintsho lweveki), ekhuselekileyo, i-dishwasher, ifakwe kwixabiso.
Ukucoca kokugqibela kufakwe kwixabiso.
Ibhedi, isitulo esiphakamileyo, ibhokisi kunye nebhafu yokuhlambela ziyafumaneka zibandakanyiwe kwixabiso.
Uyakwazi ukungcamla ioli ephilayo, iwayini, ubusi, iziqhamo kunye nemifuno.
Izilwanyana zasekhaya azamkelwa.
Iikhilomitha ezimbalwa kude, kunokwenzeka ukuba ubhukishe uhambo lwephenyane ukuya kwezona ziqithi zintle, iilwandle kunye ne-coves ye-Tuscan Riviera, ukuloba kwezemidlalo, ukuhamba ngeenqanawa kunye nayo yonke imidlalo yasemanzini.
Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwindawo yegalufa kunye namanzi ashushu.
Ndiyathemba ukuba ndiza kuba nethuba lokukubamba e "Casa Conti di sotto" okanye "Casa Laura" ifulethi elitofotofo kumgamo nje osuka elwandle eFollonica.
Isakhiwo sikhethwe yi-Discovery Channel phakathi kwe-3 eyona ndawo intle kakhulu kwi-Maremma Grossetana, kwaye nguye kuphela oye wabika i-10/10 yendawo, oku kungenxa yokuba ifumaneka kwimizuzu embalwa ukusuka elwandle kwaye isondele kakhulu ezininzi izixeko art entle iziko Italy
Isetyenziswa nangabanye ngaphakathi inamanzi ashushu iphezu kophahla ipuli ende
Siyi-1 km ukusuka kwidolophu yaseGavorrano, thatha nje i-Via Pietro Nenni. Oku kuvumela, ngaphandle kokuntywiliselwa kuhlaza kunye nokuzola kumaphandle aseTuscan, ukuba ube phakathi komgama wokuhamba kuzo zonke izinto zokuzonwabisa: iibhari, iipizza, iindawo zokutyela zaseTuscan ezigqwesileyo, iivenkile ezinkulu (i-coop nayo ivula ngeeCawe), iimarike zasekhaya ngoLwesine nangoLwesithathu. . Ngeekhilomitha ezili-12 kuphela ungafikelela kwezona lwandle zihle kakhulu zesanti kunye ne-cove enamatye e-Tuscan Riviera, indawo yokugcina indalo yaseCala Violina, iilwandle zeVIP zasePunta Ala.
Lonke ulwandle luqinisekisiweyo iflegi, luzolile, lucacile, lunzulu kwaye lushushu kakhulu amanzi apho kunokwenzeka ukuba uthathe uhambo olude kwaye uvumele abantwana badlale ngoxolo.
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Italiano, 日本語, Polski